Wumqansa ukushaya iChelsea ekhaya: uCech - Bayede News
Wumqansa ukushaya iChelsea ekhaya: uCech
Okwamanje lithukululiwe iﬁndo lamaMpondo aseQaukeni
UMDLALO wakusasa we-English Premier League (EPL) phakathi kwe-Arsenal neChelsea FC kunzima ukuqagula ukuthi ingathi ikhala impempe emuva kwemizuzu engama-90 kube kumiphi ngoba kuzobe kutholene izinkunzi ezingazimisele nakancane ngokuphoxa abalandeli zisuka nje kule sizini. Lo mdlalo uzoba eStamford Bridge okuyinkundla yeChelsea, uzoqala ligamexe elesi-6 kusihlwa.
Okubonakala kuzowenza uconsise amathe ukuthi i-Arsenal yazi kahle kamhlophe ukuthi uma idlala kule nkundla kubuya isithombe somdlalo wangesizini yangowezi-2013/14, lapho iChelsea yayibhaxabula ngamagoli ayisithupha eqandeni kuligi eyayisabizwa ngeBarclays Premier League. Nomlando wala maqembu uma ehlangene uyazisho ukuthi kusasa kuzobe kusiphuka izidindi. Kusukela ngowe-1907 la maqembu asetholane phezulu izikhathi ezili-192. AmaBlues (iChelsea) isanqobe imidlalo engama-62, amaGunners (i-Arsenal) yanqoba engama-76, badlala ngokulingana kwengama-57. Owakusasa ungowesibili kuwona womabili la maqembu kwazise iligi ivule ngeledlule.
IChelsea iyiqale kahle ngokuthola amaphuzu amathathu ekuhambeni, lapho kade ibhekene khona neHuddersfield yayibhaxabula ngamagoli amathathu eqandeni. I-Arsenal yona iyivule kabi ihlulwa ngamagoli amabili eqandeni, idlala ekhaya nompetha abavikela isicoco iManchester City. Unozinti ophinde abe ngukaputeni we-Arsenal uPetr Cech, wazise abezindaba ukuthi indlela abaqale ngayo akuyona abafisa ukuthi baqhubeke ngayo kodwa bazimisele ukulungisa amaphutha.
“Kubuhlungu ukwehlulwa emdlalweni wokuqala ikakhulukazi ekhaya. Angeke sakuphika ukuthi besitholene nezimbila zithuthe, besidlala ngaphansi kwengcindezi. Nakanjani sizimisele ukuthi emdlalweni wethu olandelayo silungise amaphutha, sijabulise abalandeli okuyiyona inhloso yethu enkulu kule sizini kusukela kade sidlala imidlalo yobungani,” kusho uCech.
Emidlalweni yeligi ngesizini edlule lama qembu ebhekene alikho elifune ukugoba uphondo njengoba edlale ngokulingana emidlalweni yomubili.
UCech uqhube wathi uyabazi ubunzima abazobhekana nabo eStamford Bridge, ngoba kunzima ukuthi iChelsea uyihlulele ekhaya. “Ukubhekana neChelsea enkundleni yayo kuhlezi kunzima ngoba ingelinye lamaqembu elithandwa kakhulu ekhaya. Kunzima kakhulu kumina ukuthi ngizodlala kule nkundla ngiyisitha, ngiyathemba ukuthi ngizokwenza kahle njengomholi weqembu,” kusho uCech. Abadlali ababhekiwe u-Eden Hazard, uWillian, u-Olivier Giroud oke wagijima kuwoma amaGunners. Abangaba wuhlupho kubadlali basemuva kuChelsea, uPierre-Emireck Aubemeyang, u-Alexandre Lacazette, uHenrikh Mkhitaryan kanye noMesut Özil.
Imidlalo ye-EPL kule mpelasonto
ICardiff neNewcastle United iWest Ham neBournemouth, iTottenham Hotspur neFulham, i-Everton neSouthampton, iLiecester City neWolverhampton, iChelsea FC ne-Arsenal
iManchester City neHuddersfield iBurnley FC neWatford, iBrington Hove and Albion neManchester United
iCrystal Palace neLiverpool
Bayede News Aug 20, 2018